Ordrs - The Online High Street | Otu Glọ nri nri ụbọchị Ordrs - The Online High Street | Otu Glọ nri nri ụbọchị
Plọ ahịa Obodo!
Anyị Bụ Ordrs
Ordrs bụ ikpo okwu dị n'ịntanetị nke na-enye gị ohere ịzụ ahịa mpaghara site na ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ahịa na mpaghara ebe a hụrụ n'anya n'ụzọ ụkpụrụ.
Anyị nwere ọtụtụ ụlọ ahịa ọkachamara nke gụnyere ụlọ ahịa agbụrụ, ndị na-ere azụ na ndị na-eri nri vegan - ndị ahịa anyị na-ebu ụzọ na-eme ihe ọ bụla (hapụ akwụkwọ na ndenye ọpụpụ ma mee ka anyị mata otu ị ga-achọ ka anyị si kwadebe nri gị) na buputa ihe ahia gi n’ọnụ ụzọ gị n’ime awa ole na ole.
N'ime oge a siri ike, anyị etinyela usoro iji kwado obodo ma hụ na anyị na-eme ordrs n'enweghị nsogbu:
- A ga-ebufe nnyefe na ụzọ enweghị kọntaktị na PPE (ihe nkpuchi ihu na aka aka)
- Onweghi ego pere mpe
- Ordr tupu elekere abụọ nke abalị maka oghere nnyefe otu ụbọchị tupu ha apụ
Lọ ahịa na-amasị gị
Zụọ ahịa sitere n'aka ndị nnọrọ onwe gị kachasị hụ n'anya na nnukwu ndị na-ere ahịa na otu ikpo okwu
Zuru oke-họpụta Mepụta
Anyị bụ ndị ọkachamara ma mara otu esi ahọrọ ngwaahịa na-amị amị na mma kacha mma
Nyefee otu ụbọchị
Ordr ozugbo enwere ike ikwe nkwa oghere nnyefe otu ụbọchị!
Dị ka na-apụta ná:
by Davidson Otobo December 14, 2020
by Davidson Otobo August 21, 2020
Anyị na-aga njem iji setịpụrụ ihe atụ na ebe a na-achọ nnyefe ohere - na-egosi ha na ị nwere ike ịkpa oke agwa yana azụmaahịa na-aga nke ọma ma na-arụ ọrụ na itinye usoro omume na gburugburu ebe obibi enyi.
Ndị 3 Es
Anyị na-emeso mmadụ niile ihe ziri ezi, ma ị bụ onye ahịa, onye ọrụ ma ọ bụ onye ibe. Anyị achọpụtala nnukwu ihe gbasara ụkpụrụ omume na oghere nnyefe a na-achọ ma kwenyesie ike na nnukwu akụ na ụba (na-arụ ọrụ n'etiti obere oge nkwekọrịta na ọrụ enweghị onwe ya) nwere ike ịba uru maka ndị ọrụ na ndị were ọrụ. Ọhụụ anyị nwere oké ọchịchọ bụ ịkọzigharị ụlọ ọrụ ahụ, iji mee ka ọ bụrụ nke ziri ezi na nke ụkpụrụ. Nakwa inye uru maka ndị ọrụ anyị, anyị na-achọ ịmekọrịta na otu na ndị otu na-ekerịta ọhụụ anyị, iji kọwaa gig akụ na ụba.
Site na plastik rue ikuku gas, uwa chere otutu okwu gburugburu. Anyị nwere obi ụtọ banyere iduzi mgbanwe nke e-commerce na-enwe mmekọrịta enyi na enyi. Anyị ga-etinye ego anyị n'ime ego-eco-friendly ngwọta dị ka eletriki ugbo ala na ere ure ụgbọelu akpa. Site na nkwado nke otu otu echiche na nkwado gọọmentị - Ordrs ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ azụmahịa e-friendly na gburugburu ebe obibi.
Mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ịdaba na ọrụ kwa ụbọchị dị ka nhicha, isi nri… .zụ ahịa. Ọ bụrụ n’ịchọta ịzụ ahịa bụ ọrụ na-agwụ ike, gịnị ma anyị nyere anyị aka ịhapụ gị oge ụfọdụ. Anyị ga-emere gị ịzụ ahịa, na-enye gị oge ị kwesịrị izu ike, soro ndị ị hụrụ n'anya wee mee ihe kachasị amasị gị.